Ahoana ny fitrandrahana solika: toetra, antony ary vokany | Fanavaozana maintso
Ahoana no alaina ny menaka
Portillo Alemanina | 11/05/2021 09:49 | Energie mahazatra
Ny solika no harena voajanahary nanetsika izao tontolo izao hatramin'ny nahitana azy. Nanomboka tamin'ny taona 1800 izy io, teo afovoan'ny revolisiona indostrialy. Raha mbola misy ny teknolojia mitaky ny fisiany dia hitohy hampiasaina mandritra ny fotoana maharitra izy io. Misy ny teknolojia hafa azo soloina toy ny angovo azo havaozina, saingy mbola tsy afaka mifaninana amin'ny solika izy ireo. Betsaka ny olona tsy mahalala ahoana ny fitrandrahana ny menaka ary inona no vokatr'izany. Izy io dia iray amin'ireo lasantsy fôsily mandoto indrindra amin'ny tantara rehetra. Tsy ampiasaina amin'ny fandoroana ny motera fotsiny izy ireo fa ny fiara fitaterana, fa ny fanamboarana fitaovana isan-karazany. Ity tontolo ity dia heverina fa handany solika 88 tapitrisa barila isan'andro, izay mitovy amin'ny habetsaky ny 14 miliara litatra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fomba alaina ny menaka, inona ny mampiavaka azy ary inona ny vokatr'izany.
1 Ahoana no alaina ny menaka
2 Mampiavaka ny faritra fitrandrahana
3 Ahoana ny fitrandrahana ny menaka: faritra misy fifantohana lehibe indrindra
4 Vokatry ny fitrandrahana solika
Ny menaka dia fifangaroan'ny ranon-javatra hydrocarbons sy fitambarana organika hafa, izay tsy misy afa-tsy amin'ny famoronana jeolojika, taona vitsivitsy monja ambanin'ny tany. Vokatry ny fôsily ny akora voajanahary toy ny zooplankton sy ahidrano., izay napetraka any amin'ny fanambanin'ny ranomasina na farihy an-tapitrisany taona lasa izay ary notehirizina ho toy ny fôsily. Noho ny hafanana sy ny fanerena dia nandalo fizotra ara-batana sy simika nandritra ny taona an-tapitrisany izy ireo. Amin'ny toerana sasany misy poros ny vatolampy dia miakatra ambonin'ny tany izy io, nefa mazàna voafandrika ambanin'ny tany ao anaty tanimboly.
Ny menaka dia nampiasaina hatramin'ny andro taloha, fa ny fanadiovana voalohany dia ny fanaovana solitany. Ny skotista James Young no nanao azy io tamin'ny 1840. Ny ankamaroany dia nanomboka nampiasaina ho solika fandoroana izany. Nanomboka tamin'izay no nanomboka nipoitra ireo mpanamboatra indostrialy. I Edwin Drake no nandavaka ny lavadrano voalohany tao Pennsylvania tamin'ny 1859.
Misy fomba maro hahitana tanimboly, indrindra amin'ny fandalinana ny jeôlôjia ao amin'ilay faritra. Ireo geology dia manam-pahaizana mandinika ny firafitry ny tany ary afaka mitsara raha misy faritra mety amin'ny famolavolana solika amin'ny fijerena ny etỳ ambonin'ny tany. Noho izany, ny fahafantarana hoe inona ny karazana fananganana vatolampy azo tanterahina hitadiavana solika, dia tanterahina ny fitsapana isan-karazany, izay mety misy ny fipoahana ambanin'ny tany, ary avy eo dinihina ny onjam-peofika vokarin'ny fipoahana, izay hahafahantsika hahafantatra izay tena izy .
Amin'izany fomba izany no amoronana loharano misy menaka. Ny fantsakana dia vita amin'ny fandavahana lavaka lava amin'ny famolavolana geolojika eo amin'ny sehatry ny solika. Ao anaty lavadrano nolavahan'ny masinina manokana, napetraka ny fantsom-by izay manome ny fahamendrehana amin'ny rafitra. Eo ambonin'ilay milina dia apetraka valizy maromaro, izay antsoina matetika hoe hazo krismasy ary tompon'andraikitra amin'ny fifehezana ny tsindry sy ny fifehezana ny fikorianan'ny solika.
Mampiavaka ny faritra fitrandrahana
Misy tsindry ampy ao amin'ny faritra fitrandrahana. Raha vao atsofoka ireo lavaka dia hiakatra irery ny menaka. Na izany aza, raha mbola misy ny tsindry dia mitohy izao ary, satria foana ny tahiry, manomboka mihena ny tsindry. Noho izany, manomboka ny dingana faharoa, izay manery ny solika hivoaka izy io ary mampiditra tsindry bebe kokoa ao anaty fitehirizana. Vita amin'ny fampidirana rano, rivotra, dioksidan'ny karbaona, ary avy eo ny gazy voajanahary.
Rehefa mbola tsy ampy ny tsindry, na te hahazo haingana ny menaka ianao noho ny antony sasany, ny hafanana fotsiny ny menaka hampihenana ny viscosity ary hampisondrotra azy haingana sy mora kokoa. Atao amin'ny fampidirana etona ao anaty tanky izany. Matetika, mba tsy hahatonga ny fitrandrahana ho lafo kokoa, dia tanterahin'i cogeneration. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana turbinina herinaratra hiteraka herinaratra avy amin'ny entona tafavoaka avy amin'ny fantsakana.
Ny entona dia ampiasaina hampandehanana ireo paompy mitifitra solika ary indraindray na ny paompy ampiasaina hanafainganana ny famokarana solika aza. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny maha-vokatra atokana azy, dia miteraka hafanana, izay avadika ho etona ary entina mankany amin'ny fitehirizan-drano mba hanomezana tsindry sy hafanana.
Ahoana ny fitrandrahana ny menaka: faritra misy fifantohana lehibe indrindra
Na dia misy tahirin-tsolika aza any amin'ny faritra maro manerantany, dia miharihary fa tsy maintsy mitady faritra izay avo kokoa ny fifantohana. Ny firenena mpamokatra solika lehibe manerantany dia i Saudi Arabia, Russia ary Etazonia. Ny 80% ny menaka nohanina androany dia avy any Moyen Orient, indrindra ny Arabia Saodita, ny firaisana amin'ny Emira Arabo Mitambatra, Irak, Qatar ary Koety.
Mihevitra ny manam-pahaizana fa ny tahirin'ny solika manerantany dia efa nahatratra ny fara tampony tamin'ny 2010. Manomboka amin'io fotoana io dia eo an-dalam-panjavona izy ireo amin'ny salan'isa 7% isan-taona. Midika izany fa maharitra amina am-polotaona maro ireo fitahirizana rano fantatra ankehitriny raha tsy miovaova ny fanjifana. Na izany aza, mihombo ny fanjifana fanampiny isan-taona, na eo aza ny ezaka hamoronana loharanon-angovo hafa.
Vokatry ny fitrandrahana solika
Araka ny ampoizinao dia misy vokany lehibe eo amin'ny tontolo iainana ny fitrandrahana solika. Misy vokany eo koa ny fomba alaina ny menaka. Iray amin'ireo vokatra lehibe ateraky ny ny fitrandrahana solika no fiakaran'ny marin'izao tontolo izao. Ary ny fiovan'ny toetr'andro lehibe no mitranga amin'ny faritra rehetra eto an-tany. Ny niandohan'ity fiakaran'ny maripana ity dia avy amin'ny famoahana entona entona, indrindra ny gazy karbonika.
Ny ankamaroan'ny gazy karbonika dia atsofoka ao amin'ny atmosfera noho ny fampiasana solika azo avy amin'ny solika izay may ho an'ny fiara fitaterana herinaratra. Ankoatr'izay dia ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra amin'ny toby famokarana herinaratra. Ny fomba nakana ny solika dia mandoto be, satria tsy afaka diovina mora ny menaka. Tokony ho fantatsika fa tsy voarohirohy amin'ny rano izy io, ka afaka manimba ny biby sy zavamaniry rehetra amin'ny faritra iray.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fitrandrahana solika sy ny toetra mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Energie mahazatra » Ahoana no alaina ny menaka